त्रिवि शिक्षण अस्पताल थप ४ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना, संक्रमित संख्या २२ पुग्यो – Health Post Nepal
२०७७ साउन ३० गते १२:३५
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा थप चार जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा सन्तकुमार दासले शुक्रबार थप ४ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि गरे।
संक्रमित हुनेमा २ नर्स, एक चिकित्सक र एक कर्मचारी रहेको डा. दासले जानकारी दिए।
संक्रमण देखिएका स्वास्थ्यकर्मी बर्थिङ सेन्टर स्वास्थ्यकर्मी रहेका उनले बताए। आज थप भएका यो सँगै २२ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रिमत भएका छन्। यसअघि बुधबार मात्र इमरजेन्सीका ४ जना नर्सिङ स्टाफ र दुई जना चिकित्सक सहित ६ जनामा कोरोना भेटिएसँगै आकस्मिक कक्ष सिल गरिएको छ।
आकस्मिक कक्षमा कार्यरत १ सय २ जनाको नमुना संकलनको रिर्पोट केहि घण्टा भित्रै आउने डा. दासले बताए। आकस्मिक कक्षको सेवा सञ्चालनको विषयमा उनले रिर्पोट आएपछि मात्र भन्न सकिने बताए।
कोरोना उपचारको फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा थप संक्रमण बढ्दै जाँदा धेरै अस्पतालका सेवा प्रभावित बनेका छन्। हाल त्रिविमा २६ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमध्ये ५ जना आइसियुमा रहेका छन्।
आइसियुमा उपचारत मध्ये २ जनाचिकित्सकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको अस्पताले जनाएको छ।